အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ Archives - BuzzFeed Myanmar
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ သဘာဝတရားရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ အတူနေဖို့ (လိင်ဆက်ဆံဖို့) ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့အချိုးအစားကို စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြောင်းရင်းခံချင်းက တူကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ အတူမနေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေသူတွေအနေနဲ့က အခက်အခဲရှိတာပေါ့။ ပြဿနာကတော့ အတူမနေတာ ကြာလာတဲ့အခါ ယောက်ျားရော မိန်းမမှာပါ ဆိုးကျိုးတွေရှိလာပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အတူမနေတာကြာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ——- (ပဋိသန္ဓေတည်နေစဉ် ရွတ်ဆိုရန်) ယော မေ အယံ ဘန္တေ ကု စ္ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ၊ သော ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆတိ ဓမ္မဉ္စ ဘိက္ခု သံဃဉ္စ၊ ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာရေတု အဇ္ဇတဂ္ဂေ ပါဏုပေတံ သရဏံ ဂတံ။ (မ-၂-၃၀၀) ဘန္တေ- အရှင်ဘုရား၊ မေ-တပည့်တော်၏၊ ကု စ္ဆိတော- ဝမ်း၌တည်သော၊ ယော အယံကုမာရောဝါ အကြင် သတို့သား သည်သော်လည်းကောင်း၊ ယာအယံကုမာရိကာဝါ အကြင် သတို့သမီး သည်သော်လည်းကောင်း၊ အတ္ထိ-ရှိ၏။ သော ထို သန္ဓေသား သည်၊ ဘဂဝန္တံ မြတ်စွာဘုရားကို၊ […]
အကြီးလား? အသေးလား? လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလား?အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားအလှဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ဘယ်လိုရင်သားပုံစံမျိုးကိုမှ အမျိုးသားတွေက ပိုပြီးသဘောကျနှစ်သက်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သုတေသနတစ်ခုက ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်